Vakashela amachibi aseSomiedo e-Asturias | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Izindlela zokuphunyuka, España, Impelasonto, General
Le paki yemvelo yiyona Ipaki yokuqala yemvelo ka-Asturias imenyezelwe kanjalo futhi yize iPicos de Europa ivame ukuthatha indawo yokuvakasha, iqiniso ukuthi iSomiedo Natural Park ayinalutho lokuyifela futhi inezinto ezithile ezihlukile, ngakho-ke kufanelekile ukuzibona futhi ngaphezu kwakho konke ukuthatha usuku ukunyuka ngokusebenzisa amachibi aseSomiedo.
I-Las Imizila yeLakes of Somiedo Zingaguqulelwa kuwo wonke umuntu, ngakho-ke zingenziwa yimindeni yonke. Lokhu kungaba wukubaleka okufanele ngempelasonto ukuze wonke umuntu ajabulele indawo yemvelo njengomndeni, ukuze aqonde ukubaluleka kwemvelo nokuthi izingane zifunde nangaphezulu ohambweni ngalunye.
1 Ungafika kanjani eSomiedo Natural Park
2 Imizila yamachibi aseSomiedo
3 Ukuthola iPaki Yemvelo
Ungafika kanjani eSomiedo Natural Park
Le paki yemvelo itholakala ku- indawo eseningizimu ye-Asturias futhi ingafinyelelwa kusuka kumaphoyinti ahlukene. Uma uvela eningizimu, ungayifinyelela kusuka ePonferrada eLeón, idolobha eliqhele ngamakhilomitha ayi-101 ukusuka epaki. Ukhuphuka ngePáramo del Sil, eVillablino nase-El Puerto uze ufike epaki. Ungaphinde uhambe usuka e-Oviedo, unemizila eminingana, okufishane kakhulu ngamakhilomitha angama-81 ukudlula eBelmonte. Ukusuka eCangas del Narcea kungamakhilomitha angama-90 kanti umzila usithatha usiyise eTebongo bese uthatha lo mgwaqo ofanayo osetshenziswa kusuka e-Oviedo, udlula eBelmonte.
Imizila yamachibi aseSomiedo
Amachibi aseSomiedo akhanga kakhulu kulabo abathanda izindlela zokuhamba izintaba, ngakho-ke kufanele ubheke imininingwane ngaphambi kokufika, ukuze sikulungele esizokuthola. Kuvele ukuthi endaweni kunemizila engaphezu kweyodwa yokujabulela la machibi. Okwamanje sithole okubili okungenzeka izindlela zokuhamba izintaba ezinamakhilomitha ahlukene ukuhamba. Omunye wabo wamakhilomitha angama-23 kanti omunye unamakhilomitha ayi-14. Ngokusobala, bobabili bavakashela amachibi abaluleke kakhulu, kepha ukukhetha elinye noma elinye kuncike ekulungiseleleni ngalinye. Ubunzima buphakathi nendawo, njengoba bungebude impela kodwa akumele sikhohlwe ukuthi yindawo yezintaba futhi kunezintaba ezimbalwa kakhulu. Omunye umehluko omkhulu ukuthi imizila emide kakhulu iyisiyingi ukubuyela lapho iqalwa khona, uma kungenzeka ukuthi akekho ongasilanda, kuyilapho leyo ekhonjiswe njengemifushane ilandelana. Lokhu kubalulekile ukuhlela ukuhamba kwezimoto.
Imizila ingaqala kusuka emaphoyinti amabili, i- inani labantu baseSaliencia noma iValle del Lago. Lawa ngamadolobha aseduze kakhulu nendawo yemvelo kanti eValle del Lago kunendawo yokukhempa yokuhlala. Emzileni weValle del Lago nasendaweni yokukhempa, uqala ukufika eLago del Valle. Leli chibi elikhulu elinesiqhingi maphakathi nendawo lapho ukudotshwa kwezinhlanzi kudume khona. Njengoba liseduze nedolobha, kunabaningi asebevele bahlala kuleli qophelo ukuchitha usuku, kepha kuningi abasazokubona. Ngaphezu kwalokho, ukudlula kuleli chibi kuqala ukukhuphuka intaba ngezinye iziqongo ezinjengePeña Ortiz, engasalungele wonke umuntu. Ushiya leli chibi ngemuva bese uqhubeka wehla ukuze ufinyelele kwelinye elikhulu kunawo wonke, iLake Calabazosa. Icebo, uma singafuni ukuhamba ibanga elide, umgwaqo ogandayiwe oqhele ngamakhilomitha amabili, kulabo abangenalo usuku lonke futhi bafuna ukubona nje leli chibi elihle. Ngasemngceleni waleli chibi kukhona ezinye ezimbili: iLake Cerveriz neLaguna de la Cueva. Udlula ichweba laseCerveriz, ufinyelela ethafeni elijwayelekile eliluhlaza lase-Asturias, okuyisiqalo sokubuyela eValle del Lago emzileni oyisiyingi.
Uma, kunalokho, ishiya idolobha laseSaliencia, ukhuphuka igquma iFarrapona ngemoto ukuze uqale umzila wokuhamba odabula amachibi lapho. Kulokhu, sizokwenza lo mzila ngenye indlela, sifike kuqala eLago de la Cueva bese siqala umzila kolunye uhlangothi ukuze siwuqede kuleli cala eLago del Valle. Kulokhu, ungakhetha ukujika noma ube nezinto zokuhamba ezisilanda kuleli qophelo. Noma kunjalo, amaphuzu amabili okuqala asinikeza umbono omuhle wokuvakashela amaSomiedo Lakes adumile.
Ukuthola iPaki Yemvelo
Le paki yemvelo ayidumile ngamachibi ayo kuphela, kodwa futhi ngokuba yindawo evikelekile eyingxenye yokugcina izindawo zezwe lethu lapho kusinda khona ibhere elinsundu. Ngokusobala, lezi zindawo zivikelwe futhi azinakufinyelelwa, kepha zisikhombisa ingxenye yokubaluleka okukhulu kwepaki yemvelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Vakashela amachibi aseSomiedo e-Asturias
ILondon noJack the Ripper noSherlock Holmes